IZICELO-I-Square Technology Group Co., Ltd.
Itekhnoloji yesikwere ibonelela ngesikhenkcezisi esijikelezayo, ifriji yetonela, ifriza yokufaka ngaphakathi, isitya sefriji sokutya kwaselwandle okwahlukeneyo, kubandakanya ifillet yentlanzi, ifillet yonke, iqokobhe / iitrimps, iOctopus, oononkala, iSurimi, njl.
Isikhenkcezisi esijikelezayo, ifriji yetonela kunye nesikhenkcezisi sokufaka ngaphakathi zilungele ukubanda yonke inkukhu, iinxalenye zenkuku, iinxalenye zenyama, inyama yenyama, inyama enongwe, inyama eqhotsiweyo, njl njl. Ukuhlangabezana nemfuno yococeko ephezulu kwishishini lenyama, iifriji zixhotyiswe Inkqubo yokucoca ye-CIP ukucoca ngokucokisekileyo nangendlela efanelekileyo ifriji. Ukufezekisa ixesha elide lokuvelisa, i-ADF yenkqubo yokuhambisa umoya inokuxhotyiswa njengokhetho lokuvuthuza iqabaka elakhelwe kwikhoyili. Izikhenkcezisi zethu zisetyenzisiwe kwaye zamkelwa kakuhle ziiprosesa eziphambili zenyama, kubandakanya ukutya kweTyson, ukutya kweCP, iHormel, iCargill, iCOFCO, njl.
Itekhnoloji yesikwere ibonelela ngesikhenkcezisi esijikelezayo ukuze ikhenkceze intlama eqandisiweyo, i-croissant, i-puff pastry, iqhekeza leqanda, iipayi. Sikwabonelela ngee-proofers zomoya ezinobushushu kunye nolawulo lokufuma
Iimveliso zokutya esele zilungile zingayipakisha isidlo sasemini, ipasta ephekiweyo, irayisi eqhotsiweyo, ii-noodles, iibhola zenyama, iisosi, njl.njl. Kuxhomekeke kubume bemveliso kunye nomkhenkce, umthengi unokukhetha ifriji yomoya, ifriji yetonela, ifriji enxibelelana nayo.
Umbhede we-IQF ococekileyo ulungele ukuqina imifuno, iziqhamo, ii-ertyisi, iimbotyi, njl.
Izikhenkcezisi ezijikelezayo, iitonela zefreyimu zilungele ukumisa iimveliso zekhekhe laseTshayina, kubandakanya amadombolo, iinyama zenyama, iinaliti, iZongzi, njl.njl.
Imveliso ye-ayisikhrim, inokukhenkceziswa ngumkhenkce ojikelezayo, ifriji yetonela, iifriji zoqhakamshelwano. Ezinye zeeproceosors zethu ezaziwa kakhulu ze-ice cream kubandakanya i-Unilever-Wall's, iWufeng, iXuehui, neHongbaolai.